You are at:Home»Somali News»Waadi Cadaabeed ayaa Qaadiga Dhulka uga sugnaaday Qaadiga Samada (ويل لقاضي الارض من قاضي السماء ) waa Qiso dhab ah.
By admin on	 April 15, 2019 Somali News
Waxaa jiri jiray Nin leh Foorno lagu dubo Digaagga Dadkuna aad wax uga iibsadaan , Maalin maalmaha ka mid ah Ninkii Foornada lahaa oo Digaagii ka dhammaaday ayaa waxaa u yimid nin wata Digaag uu isagu Gacantiisa ku soo qashay , una baahan oo kali ah in loo Foorneeyo , ninkii wxaa loo qabtay 20/daqiiqo ka dib in uu u soo laabto Digaagiisii oo diyaar ah.
Intaan waqtigiiba la gaarin ayaa waxaa ninkii Foornada lahaa u yimid Qaadigii Magaalada oo Digaag Duban raadinaya waxaana loo sheegay in aay dhammaatay , wuxuu ku yiri midkaan hadda foornada ku jira iga iibi , waxaa lagu yiri Ninbaa hada u imaanaya , Qaadigii oo ku adkeystay in Digaaggaas Maantay cid aan isaga aheyn cunaha marin ayaa Furunlihii ku yiri Digaagga isii Ninkii lahaana u sheeg haddii uu ku weydiiyo in aay biibtay.( Duushay)
Furunlihii ayaa ku jawaabay Qaadi Ninkaan Digaaggii uu Gacantiisa ku bireeyey ayaa biibtay iga yeeli maayee Xal kale ma heysaa?
Furunlihii si xun ayaa loo fiiriyey markaas ayuu inta baqay Digaagii Qaadiga Faraha ka saaray . laakiin Qaadigii ayaa ninkii foornada lahaa ku dhiirageliyey in uusansan baqin maadaama ninka lagu soo dacweyn doono isagu yahay.
20/tan daqiiqo ka dib waxaa is keenay Ninkii Digaagga ama doorada lahaa hadba taad u taqaan si uu u qaato waxaase loogu jawaabay in Dooradii biibtay.
Muran dheer ka dib labadii nin waxeey isla garteen in Qaadiga Magaalada loo Dacwo tago si uu u kala saaro..
Intii aay Waddada socodeen ayey waxeey la kulmeen Nin Yahuudi ah iyo Nin Muslim ah oo Dagaalamaya , waxeeyna guda galeen in aay kala celiyaan laakiin Nasiib darro Furunlihii ayaa il ka riday YUhuudigii maadaam uu lahaa Cidddiyo dhaadheer oo uu Digaagga Maqaarka kaga fiiqi jiray.
Furunlihii Cagaha ayuu wax ka dayey isagoo is tusay Xukunka Il dhacday in aaysan wax fudud aheyn, orodkii ayuu wuxuu ku tegey Masjid aan aad uga fogeyn si uu ugu dhuunto , balse Nasiib darro isagoo kor u koraya Minaaradii Masjidka ayuu ka soo dhacay , isagoo ku soo dul dhacay Oday Masjidka ka soo baxay oo Tuur yeeshay Da´darteed Wiilkiisuna gacanta hayo , halkaas oo uu odaygii ku geeriyooday.
Wiilkii Odayga Gacanta hayey ayaa markiiba Gacanta ku dhigay Ninkii Aabbihii dilay, wuxuuna la soo aaday Xaafiiskii Qaadiga oo aay horay ugu sii sugnaayeen Ninkii Doorada laga dhacay, iyo Yuhuudiogii Isha laga riday , ka dib maxaa dhacay?
Qaadigii ayaa yiri Maxakamaddu waa aay furan tahay ee yaa dacwad qaba.
1- ugu horreyn waxaa istaagay Ninkii Doorada laga dhacay wuxuun qaadigii u sheegay in uu Ninkaan Furunlaha ah u keendasday Dooro uu isagu Gacantiisa ku soo goowrcday si uu ugu Foorneeyo , Waqtigii uu qaadan lahaa markii la gaarayna uu ugu jaeaabay in Dooradiisii biibtay.
Qaadigii ayaa Ninkii Jawaab deg deg ah siiyey oo yiri war miyaadan Muslim aheyn oo aadan rumeysneyn Qadarta Alle iyo Ilaahii iyadoon jirin abuuray in uu hadana duulin karo, Nacam ayuu ku jawaabay Ninkii ka dibna iridda ayuu tartiib uga baxay.
2- Waxaa xigay oo isna Dacwaddiisa Gudbistay Ninkii yuhuudiga ahaa oo ku Dacwoonaya in Ninkani Il ka riday Magtii ishiisana uu u baahan yahay.
Qaadigii ayaa Yuhuudigii ugu jawaabay Magta Isha Muslimka ah waa 50/Halaad (Geel )Tan Yuhuudana waa 25/Halaad , haddaba si aan 50/Halaad kuugu Xukmiyo aaway Ninkii Isha kale ha kaa ridee. Yuhuudigii oo kor u qaylinaaya ayaa yiri Qaadi Isheydii waan cafiyey oo Ninkaas waxba uma heysto.
3- ugu dambeyn waxaa istaagay Wiilkii Aabbihiis lagu soo kor dhacay wuxuuna ku dacwooday in Ninkaani iska soo tuuray Minaaradda Masjidka kuna soo kor dhacay Aabbihiis oo waayeel ah Xilli aay Salaad Casir ka soo baxeen sidaasna uu ku geeriyooday Aabbihiis Magtiina uu ka rabo.
Qaaadigii Wuxuu Amray Ninkii Odayga ku soo dhacay in uu istaago Minaaradda Hoosteeda Halkii odaygu ku geeriyooday, Wiilkiina waxaa la amray in uu Minaaradda Fuulo , ka dibna iska soo tuuro si uu ugu dhaco Ninkii Aabbihii dilay.
Wiilkii ayaa ku jawaabay Qaadi wax dhici kara maahan , waayo waa intaas oo aan la gefaa oo aan meel cidla ah ku dhacaa sidaasna aan anigu ku dhinto , ama markuu ogaado in aan isa soo tuuray uu Midig ama Bidix mid isu badiyo si aan cidlo ugu dhaco , qaadigii ayaa durba ku jawaabay waa runtaa laakiin Aabbahaa maxaa isaga markii hore u diiday in uu Labada dhinac dhan u bato Wiilkii oo yaaban ayaa isna yiri Qaadi Dhiiggii Aaabaheey waa iga cafis cid aan wax u heystana ma jiraan.
Haddaba Qaadigaan Faajirka ah Si xaq darro ah ayuu u difaacay Ninkii Xaq darrada ku siiyey Xoolo uusan laheyn , aniguna bilaa macno uma soo qaadan Qisadaan ee waxaa rabaa in aan ogaado heerka uu taagan yahay Garaadka ummadda Soomaaliyeed intooda Caafimaadka qabta , iyo haddii aay Waddanka ka jirto arrintaan mid la mid ah Jawaabtu waax xaggiinna.
Qisadaan waxaa la dhahaa :- Waadi Cadaabeed ayaa Qaadiga Dhulka uga sugnaaday Qaadiga Samada ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
Al-xaaji Abdi Xaaji Ali Fidow